Pilo kely : Antananarivo ihany ve Madagasikara ?
mardi, 19 janvier 2021 18:46
Filoham-pirenena : Avy Antananarivo
Filohan'ny HCC : Avy Antananarivo
Filohan'ny Loholona : Avy Antananarivo
Filohan'ny Antenimieram-pirenena : Avy Ambatofinandrahana Ambositra Fianarantsoa
Praiminisitra : Avy Antsiranana
Mba diniho ihany fa sao lahy mitanila loatra e, tsy resahiko ny hauts emplois, DG, SG, ny mpitsara rehetra izay azoko antoka ny 80% avy Antananarivo. Ny ministra, majorité Antananarivo, ny mpilaza vaovao TVM Antananarivo.
Ny mpandoa hetra 80% avy amin'ny Faritany hafa ankoatran'Antananarivo.
Lazaina fa mandrangitra adi-poko, nefa dia zava-misy no ambara. Fomba fiady efa tsy mahomby ny fampitahorana adi-poko izany, eto tsy misy miady foko izany na misy miandry omena seza, fa ampy kosa ny fitanilana e, aleo ho an'ny faritra ny harenan'ny faritra, dia samy mampandroso ny azy, dia tendreo aminareo any zay tianareo tendrena fa tsy misy malahelo an'izany rehefa mandroso ny faritra tsirairay.
Teti-bola 90% Antananarivo mitantana azy, 10% Faritany. Lalana pavé 10km ve no omena ny Governora, tsy mankadala lohan'olo fo zany, nefa volamena amin'ny tonne avy any amin'ny faritra no ahondrana any ivelany, na mba sekoly iray tsy miverina aminy.
Soa ihany fa ny Filohan'ny HCC avy ao Antananarivo no niteny hoe tsy "Antananarivo ihany no Madagasikara".
Rariny raha miakatra Antananarivo ny Malagasy kere any atsimo, ka any zero budget, Antananarivo fo raha jiaby.
Hisaorako ireo mponin'Antananarivo mahatsapa sy manohitra izany fiangarana izany, satria tsy ny mponin'Antananarivo ihany koa no migoka izany harena izany, Antananarivo aza mahantra lavitra noho ny faritra ihany koa, fa olom-bitsy manam-pahefana avy Antananarivo sy avy amin'ny faritra no manao olo bado.